Waxyaabaha jirka ugu muhiimsan: Cinjir xumaaday
Dahaarka: Dharka xargaha Nylon
Jir: silig bir adag ah
Cabir: 1/2 ″ -72 ″ (DN15-DN1800)
Qiimeynta cadaadiska: PN10 / 16, Fasalka125 / 150
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Wadajirka Balaadhinta Rubber Singl Wareeg Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Balaadhinta Balaadhinta Isku-xidhka Twin Sphere
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Balaadhinta Balaadhinta Isku-xidhka Twin Sphere Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Gaasta Dhaawaca Gawaarida
Goomaatada dhaawacan ee muusiga ah ee qiiqa iyo is-weydaarsiga kuleylka iyo darajada nukliyeerka iyo goomaha nabarka ee dhaawaca HDLE. NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Gaasta Dhaawaca Gawaarida Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Dhaqdhaqaaqa korantada ee badan HEM nooca beddelka taxanaha
Taxanaha HEM waa jiil cusub oo jilayaal koronto oo wejiyo badan leh oo ay soo saareen ayna soo saareen kooxda farsamada ee NORTECH iyadoo lagu saleynayo baahiyaha isticmaalaha iyo sannado khibrad horumarineed leh.
Taxanaha HEM wuxuu soo saari karaa noocyo kala duwan marka loo eego baahida isticmaalaha, sida aasaasiga ah, caqliga badan, baska, kala-goynta caqliga iyo qaabab kale, kuwaas oo ammaan ah, xasilloon oo lagu kalsoonaan karo si ay ula kulmaan xaalado codsiyo kala duwan oo dhinacyada kala duwan ah.
HEM taxanaha jiheeyeyaasha korantada badan ee leexashada waxaa loo isticmaali karaa oo keliya maaddada qallalan ee tooska ah sida xakamaynta filtarka, fallaaraha furan, iyo joojiyeyaasha, laakiin sidoo kale valves-ka korontada ku shaqeeya sida baalaska balanbaalka, furayaasha kubbadda, iyo fureyaasha fiilooyinka ka dib rakibidda a sanduuqa marshada dixiriga qayb-leexasho.
HEM taxanaha masaafada tooska ah ee soosaarka tooska ahi waa 60N.m-800N.m, xawaaraha xawaaraha waxsoosaarka waa 18rpm-144rpm, iyadoo loo eegayo xawaaraha kaladuwan iyo saamiga xawaaraha ee kaladuwan, sanduuqa dixiriga dixiriga ah ee korantada qaaska ah waxaa loo rogi karaa shuruudaha xoogga iyo ka sii culus.
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Dhaqdhaqaaqa korantada ee badan Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Qeyb u noqo Qeyb koronto-qabte Qaab Qarxa Nooca LQ
LQ gawaadhida moodeelka ayaa ah jiilka cusub ee shirkadeena waxaana loo adeegsan karaa wadista iyo xakamaynta baalal-balanbaalisyada, furayaasha kubbadaha iyo fureyaasha furayaasha (qaybta-leexashada leh 90 ° dhaqdhaqaaqa). Iyadoo la adeegsanayo shaqooyinka xakamaynta maxalliga ah iyo kontoroolka fog labadaba.
Widely Waxaa si aad ah looga isticmaalaa meelaha ay ka mid yihiin saliida, kimistariga, koronto dhalinta, daaweynta biyaha, sameynta warqadaha iwm
Protection Difaaca xayndaabku waa IP67, fasalka cadeynta qaraxuna waa d II CT6 (LQ1, LQ2) iyo d II BT6 (LQ3, LQ4, LQ4JS)
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Qaybta leexashada Caddaynta qarxinta korantada Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
ASME waalka jeegga Swing, birta kaarboon, birta birta ah iyo birta daawaha ah
Ballaca: 2 ″ -32 ″, Fasalka150-Class2500
Jirka / bonnet / cajalid: WCB / LCB / WC6 / WC9 / CF8 / CF8M
Goo: No.1 / No.5 / No.8 / Daawaha
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha ASME Madax Hub Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Madax Isku-dheelitirka Mashiinka
Waalka Isku dheelitirka, BS7350
Qalab laba jibbaaraya laba nooc oo kala jaban (FODRV)
DN65-DN300, Flange wuxuu dhammaadaa DIN EN1092-2 PN10, PN16
Jidhka iyo lafdhabarta birta duuban GGG-40.
Jir aan lahayn ahama Daabacaadda: EPDM.
Oriifice is bedbeddela Xeerar labalaab ah.
Heerkulka shaqada -10ºC + 120ºC.
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Madax Isku-dheelitirka Mashiinka Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
API602 Faallooyin been abuur ah oo Globe Valve ah
godka alxanka KU DHEER ANSI B16.11
dhamaadka dunta ilaa ASME B1.20.1
Jirka: A105 / F11 / F22 / F304 / F304L / LF2 / LF3 / F316
Goo: No.1 / No.5 / No.8, SS304 / SS316 / Monel
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Faallooyin been abuur ah oo Globe Valve ah Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
DIN-EN Globe Madax
DIN-EN Globe waalka, Habka tooska ah ee loo yaqaan 'globe valve' (Tee pattern), waalka xagasha qaabdhismeedka adduunka, Wareegga caalamiga ah ee loo yaqaan 'Y type'
waxaa loo qaabeyn karaa sidii jeegga jeegga jeegga, waalka baaritaanka adduunka, SDNR.
xirmooyinka hoose ayaa la heli karaa marka la codsado arjiga uumiga heerkulka sareeya
Naqshadeynta iyo soo saaraha EN13709, dhexroor DN15-DN400, PN16-PN100.
birta loo yaqaan 'Cast steel' (1.0619), birta birta ah (1.4308,1.4408), birta daawaha ah iyo birta birta ah
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha DIN-EN Globe Madax Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Bellows waxay xirtaa waalka adduunka, ee birta la tuuray, birta birta ah iyo birta daawaha ah, ee uumiga heerkulka sare.
Qalab toosan oo caalami ah (Nidaamka Tee), qaabka waalka adduunka xagal, Qaab jajab ah oo caalami ah (Y nooca)
Naqshadeynta iyo soo saaraha DIN3356 / EN13709
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Bellows Khatimidii Globe Madax Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
ASME Globe Valve, 2 ″ -30 ″, Fasalka150-Fasal1500
Jirka / bootada / saxanka: Kaarboonka Birta / Bir daxal laheyn
Kursiga: Kaarboon-ka-istaagga // Bir aan xadi lahayn / STL
Hawlgalka: sanduuqa gacmaha / shaashadda
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha hogaaminaya ASME Globe Valve Soo saaraha & Alaab-qeybiye.